Qarax Dhimasho & Dhaawac badan sababay oo ka dhacay Duleedka Muqdisho | Keydmedia
Qarax Dhimasho & Dhaawac badan sababay oo ka dhacay Duleedka Muqdisho
Muqdisho (KON) - Ugu yaraan 20 Ruux oo Shacab ay ayaa ku geeriyooday, 28 kalena way ku dhaawacmeen Qarax Maanta ka dhacay inta u dhaxaysa Muqdisho & Degmada Afgooye.
Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya Nooca uu ahaa Qaraxa, Warar ayaa sheegaya in uu ahaa mid loo adegsaday Gaari NOAH ah, halka Wararka kalena ay leeyihiin wuxuu ahaa Miino Dhulka lagu aasay.
Qaraxa ayaa bartilmaameedkiisu ahaa Kolonyo Gaadiid ah oo uu la socday Gudoomiyaha Gobolka Shabeellaha Hoose, Maxa'ed C/qaadir Nuur Siiddi oo marayay meel u dhaw Deegaanka Xaawo Cabdi oo ku yaalla wadada isku xirta Muqdisho & Afgooye.
Goobjooge ayaa u sheegay Warbaahinta Keydmedia Online in Qaraxa uu bur buriyay Labo Gaari oo ay la socdeen Dad badan oo Rakaab ah oo kusii jeeday Magaalada Muqdisho, balse intooda badan dadkaasi ay ku dhinteen Qaraxa oo Ujeedkiisa markii lala waayay uu iyago haleelay.
"Labo Gaari ayaa gubatay, waxaa Dhulka Daadsan Meydadka aan la aqoonsan karin Wajiyadooda, Baabuurta Dabdamiska & Gurmadka Deg Dega ayaa yimid Goobta, waxaana ay qaadayaan Meydadka & Dhaawacyada dadka Shacabka ah, sida la ii sheegay Qaraxa waxa uu ahaa Miino, balse ma hubo," ayay tiri Gabar degan Xaawo Cabdi.
Al shabaab ayaa sheegatay Mas'uuliyadda Qaraxa ay Dadka badan ee Shacabka ah ku dhinteen ee Maanta ka dhacay Duleedka Magaalada Muqdishi, balse Kooxda Al shabaab aya aku hanjabtay inay u aargudi doonto Dilka Godane. Wararkii ugu danbeeyay ayaa sheegaya in Tirada Dhimashada ay gaartay 20 Qof oo Shacab u badan.
Al shabaab waxa ay sheegtay in Weerarka Ismiidaaminta ah ay ku dileen Ciidamo badan oo ay ku jiraan 5 Ajbani ah oo u dhashay dalaka Mareykanka & South Africa, kuwaasi oo la shaqeynayay Shirkada dhanka Sirdoonka & Tababarka ka caawisa AMISOM oo lagu magacaabo Bancroft.